အဘိုးပြောသောပုံပြင်များ ( အပိုင်း- ၂ ) ( Henry Aung ) — Steemit
အဘိုးပြောသောပုံပြင်များ ( အပိုင်း- ၂ ) ( Henry Aung )
မင်္ဂလာပါ။ လွန်ခဲ့သော ရက်က ကျွန်တော့ အဘိုး၏ တိုက်ပွဲ အတွေ့အကြုံများမှ ရွှေချောင်းများ တွေ့ရုံသာ တွေ့ခဲ့ရ၍ မပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရသော အကြောင်းကို ဖေါ်ပြပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ဤတွင် စာဖတ်သူများ အနေဖြင့် တွေးမိကောင်း တွေးမိပါလိမ့်မည်။ အဘိုးအနေဖြင့် စစ်ကြီး ပြီးသွားသော်လည်း အဘယ့်ကြောင့် ထို ရွှေများကို အနည်းဆုံး တခေါက်လောက် ပြန်၍ ကြိုးစားပြီး ရှာသင့် သည့်အကြောင်း။ ကျွန်တော့်အနေဖြင့်လည်း ထိုသို့ တွေးမိပါသည်။
မိမိ မှတ်ညာဏ်ထဲတွင် ရှိနေသော ထိုပတ်ဝန်းကျင်၏ အနေအထားများကို မှတ်မိနေသေးသ၍ ကြိုးစား၍ တခေါက်လောက်တော့ ရှာကြည့်သင့်သည်ဟုထင်ပါသည်။ သို့သော် အဘိုးအနေဖြင့် ထိုအခွင့် အရေး မရခဲ့ပါ။ စစ်ကြီး ပြီးသွား ပြီးနောက် လွတ်လပ်ရေးရသည်နှင့် ရောင်စုံသူပုန်များ ထကြွ သောင်းကျန်လာကြပြီး ထိုကာလ အတွင်း ခရီးသွားလာရခက်ခဲသလို အဘိုး အနေဖြင့် အဘွား ဖြင့် အိမ်ထောင်ကျပြီး အလုပ် အလွန်များလွန်းသောကြောင့် ထိုရွှေချောင်းများ ထပ်မံရှာ ဖို့ရန် အခွင့် အရေး မရခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အဘယ့်ကြောင့် အဘိုးအလုပ်များသည်ကို ဖေါ်ပြပေးပါမည်။ အိမ်ထောင်ကျပြီးနောက်အဘိုး မည်မျှ အလုပ်များသနည်း ဆိုလျင် ကျွန်တော့ အဘွား ဆိုရှယ်လစ် မိခင်ကောင်းဆု ရခဲ့သည် အထိပင်ဖြစ်ပါသည်။ သားသမီးများ မွေးဖွား လိုက်သည်မှာ စုစု ပေါင်း ၁၆ ယောက် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော့ ဖခင်၏ ညီအစ်ကို မောင်နှမများမှာ ယောက်ျားလေး ၁၀ ယောက် ၊ မိန်းခလေး ၆ ယောက်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော့ ဦးလေး များ အန်တီများ အိမ်ထောင်ကျ၍ သူတို့ မှ မွေးဖွားလာကြသော ကျွန်တော့ တူ၊ တူမ များ ပေါင်းလိုက်လျင် ကျွန်တော့ ဆွေမျိုး အသိုက်အဝန်း မည်မျှ တောင့်တင်းသည်ကို ခန့်မှန်းကြည့်နိုင်ပါသည်။ ဤသည်မှာ အဖေဘက်မှ ဆွေမျိုးများသာ ရှိပါသေးသည်။ ကျွန်တော့ အမေ ဘက်မှ ဆွေမျိုးများ ထည့်ပေါင်းလိုက်လျင် ရွာတရွာ တည်လို့ ရနိုင်လောက်ပါသည်။
ဤသည်မှာ ကျွန်တော့ အဘိုး အလုပ်များရခြင်း အကြောင်း နှင့် ထိုတိုက်ပွဲ အတွင်း တွေ့ခဲ့သော ရွှေချောင်းများထပ်မံ ရှာဖို့ရန် အခွင့် အရေး မရခဲ့ခြင်း အကြောင်း ဖေါ်ပြပေးရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော် မှတ်မိနေသေးသော အဘိုး ပြောပြခဲ့သည့် တိုက်ပွဲတခု အကြောင်း ဖေါ်ပြပေးချင်ပါသည်။
အဘိုး ပြောပြချက်အရ ထိုတိုက်ပွဲမှာ တနိုင်း ၊ ဟူးကောင်းချိုင်းဝမ်း ဘက်ရှိ တောနက်တနေရာတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အဘိုးပြောပြခဲ့သည်မှာ အင်ဖာဘက်မှ တပ်ပျက်၍ ဆင်းလာကြသော ဂျပန်များအား လမ်းခုလတ်တွင် ဖြတ်တိုက်ကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုဂျပန်တပ်များ နောက်လိုက်လံတိုက်ခိုက်ရင် ထိုတပ်ပျက်နေသော ဂျပန် တပ်စု လေးမှာ တောင်ကုန်း တနေရာတွင် အခိုင်အမာ တပ်စွဲ ထားသော ဂျပန် တပ်ခွဲ တခွဲ နှင့် သွားရောက်ပူးပေါင်း မိသည်ဟု ဆိုပါသည်။
ထို့ နောက် အဘိုးတို့မှာ ထို တောင်ကုန်းအား ရရှိရန် တိုက်ခိုက်ကြသည်မှာ နံနက် ၁၀ နာရီ ခန့်မှ တိုက်လိုက်သည့် တိုက်ပွဲ နောက်တနေ့ ညနေ ၂ နာရီ ခန့်ရောက်မှ ထိုတောင်ကုန်းအား ရရှိခဲ့သည်ဟုဆိုပါသည်။ ထို့ နောက် ထိုတောင်ကုန်းအား စွန့်ခွာပြေးကြသော ဂျပန်များ နောက်သို့ ထပ်ကြပ်မကွာ လိုက်၍ လိုက်လံခြေမှုန်းကြပါတော့သည်။ ဤသို့ ဂျပန်တပ်များနောက် လိုက်ရင်း သူပစ် ကိုယ်ပစ် ဖြင့်တိုက်ပွဲ ဖြစ်နေစဉ် တနေရာ ရောက်သော အခါ အလွန်မွှေးကြိုင်သော ရနံ့ကို ရကြောင်း ပြောပြပါသည်။
အဖိုး ပြောပြသည်မှာ ယမ်းနံ့များ ကြားမှပင် ထို အမွှေးနံ့မှာ တတောလုံး ကြိုင်လှိုင်၍ ရှိနေသည် ဟုဆိုပါသည်။ အဘိုးတို့လည်း တိုက်ပွဲ အတွင်းဖြစ်၍ မိမိကိုယ်ကို မသေစေရန်သာ သတိထားနေကြရသဖြင့် ထို အမွှေးနံ့အား တောပန်း တမျိုးမျိုး၏ အမွှေးနံ့ဟုသာ ထင်နေခဲ့ကြောင်း ပြောပြပါသည်။
တနေရာရောက်သော အခါ သစ်ဆွေးပင်ကြီးတပင် လဲကျနေသည်ကို တွေ့၍ အဖိုးလည်း ထို သစ်ဆွေးပင် အား အကာအကွယ်ယူ၍ ဂျပန်များအား ခံပစ် နေသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ရုတ်တရက် ထို သစ်ဆွေးပင်အား သတိထားကြည့် မိလိုက်သော အခါ အောက်ဘက်တွင် သစ်သားများ ဆွေးမြေ့ ပြတ်ကျ နေခဲ့၍ တဝက်တပျက် ကျန်ရှိနေသော သစ်ဆွေးပင်အတွင်း ၌ လူကြီးပေါင်လုံး ခန့်ရှိ၍ အရည်လဲ့နေသော သစ်မွှေး ဆီခဲကို တွေ့ရပါတော့သည်။
ထို တတောလုံး မွေးကြိုင် နေရသော အကြောင်း အရင်း မှာ ထိုသစ်မွှေး ဆီခဲကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ အဖိုးလည်းထို သစ်မွှေး ဆီခဲကြီးအား အတန်ကြာကြည့် နေခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။ သို့ သော် " တက် " "တက်" "ပစ် "ပစ် " "အသေသတ်" ဟူသော စစ်မိန့်များ အောက်တွင် ရှေ့တို့သာ ပြေးတက်၍ ဂျပန်များ အား လိုက်လံပစ်ခတ် နေခဲ့ရသောကြောင့် ထိုသစ်မွှေး ဆီခဲ မည်သည့် နေရာတွင် ရှိနေခဲ့သည်ကို လည်း မမှတ်သားနိုင်ခဲ့ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါသည်။
ယခု ကာလပေါက်ဈေး သစ်မွှေးဆီ တကီလို လျင် ဒေါ်လာ ၅၀၀၀၀$ ခန့် တန်ကြေးရှိသော အချိန် ထို လူကြီး ပေါင်လုံးခန့်ရှိ၍ အရှည် မည်မျှရှိအုံးမည် မသိသော ထိုသစ်မွှေး အဆီခဲကြီးမှာ ဟူကောင်း ဒေသရှိ တောနက်တနေရာတွင် ရှိနေအုံးမည်လား ၊ ထိုက်သင့် သောသူ ရရှိသွား ပြီလား ဆိုသည်ကို တော့ ကျွန်တော်လည်း ပြောနိုင်စွမ်းမရှိပါ။ ကျွန်တော့ အနေဖြင့် သစ်မွှေးပင်လည်း မမြင်ဖူးသလို သဘာဝအတိုင်း တောတောင်တွင် ပေါက်ရောက်နေသော သစ်မွှေးပင်များလည်း မည်မျှ ကြီးထွားနိုင်ကြောင်း မသိပါ။
ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်း မမြင်ဘူးလိုက်ရ၍ ဤကဲ့သို့သော အရွယ်အစားရှိသော သစ်မွှေး ဆီရှိသည်ဟူ၍ သာ အဘိုးပြောပြခဲ့၍ သိခဲ့သည် အတိုင်း ပြန်လည် ဖေါက်သယ်ချ ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မယုံလျင် ပုံပြင်ဟုသာ မှတ်ကြ စေလိုပါသည်။
သို့သော် အဖိုး ပြောပြသော တောတွင်း တိုက်ပွဲ အတွေ့အကြုံများတွင် ဤကဲ့သို့ သဘာဝရတနာများ ၊ အံ့သြဖွယ်ရာ တောတွင်း သားကောင်များ ၊ သစ်ပင် ပန်းမန်များ အကြောင်း ကို အလျင်သင့်လျင် ဖေါ်ပြပေးပါမည်။
ခါ ဂါ ငါ ဒါ ပါ ဝါ မောက်ချနဲ့သာ ရေးရမှာ တို့ရဲ့ မြန်မာစာ
ဆိုပေမဲ့ အချို့စာလုံးတွေ ဆိုရင်တော့ ဝိုက်ချသာ သုံးရပါ့မယ်
ဥပမာ - အဓိပ္ပာယ်၊ အလို့ငှာ၊ သပ္ပာယ်၊ သခွားသီး၊ ပွားများ
ထို့ကြောင့် အခြားစကားလုံးများကို မောက်ချသုံးရေးလျှင် ရေးထုံး မမှန်ပါ။
ဆရာလုပ်သလို ဖြစ်သွားရင် so sorry ပါ အစ်ကိုကြီးက စာဖတ်အားများတော့ post တစ်ခု ရေးပြီးတိုင်း တစ်ခေါက်လောက် ပြန်ဖတ်လိုက်ရင် တွေ့လောက်တဲ့ အမှားလေးတွေ ပါတတ်တယ် ဥပမာ ရတာနာ၊ သစ်မွေး၊ သူပြစ် ကိုယ်ပြစ်
ပြန် ပြန် စစ်ပေးရင် ပိုပြည့်စုံသွားတာပေါ့ဗျာ
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ အတတ်နိုင်ဆုံး ပြင်လိုက်ပါပြီ။ ကျွန်တော်ကိ်ုယ်တိုင်က မြန်မာသဒ္ဒါ အားနည်း တာလည်း ပါသလို စာလုံးပေါင်း သတ်ပုံ အမှန်မသိတာလည်း ပါ ပါတယ်။ အခုလို ပြင်ပေးတော့ နှောင်မမှား ရအောင် ဂရုစိုက်နိုင်တဲ့ အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
ပြင်ပေးတာ လက်ခံတဲ့ အတွက် ကျနော်က ဂုဏ်လည်း ယူ ကျေးဇူးလည်း တင်ပါတယ် အစ်ကိုကြီးရာ
ဘာပဲပြောပြော အစ်ကိုကြီးတို့က steemit မြန်မာ အသိုင်းအဝ်ိုင်းမှာ ကျနော်တို့ အတွက် mentor တွေပါ ကျနော်လည်း comment တို့ reply တို့မှာ ဖြစ်သလိုရေးတတ်ပေမဲ့ post ကိုတော့ အထူး ဂရုပြုရေးပါတယ် မြန်မာစာကို မြတ်နိုးတာလည်း ပါတာပေါ့ဗျာ
tharpauk (53) ·2months ago
အရင်တုန်းက လူကြီးတွေက သားသမီးတွေတော့အများကြီးမွေးကြတာ ခုခေတ်တော့ ၁ယောက် ၂ယောက်တောင် မလွယ်ပါဘူးဗျာ
အေးဗျာ။ စီးပွားရေး ကြောင့်လည် ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ အဘိုးတို့က လယ်လုပ် တောင်ယာခုတ်တော့ လူအင်အားများများလိုတယ်လေ။
Wow! အဘိုး လုပ်ငန်း ကောင်းချက်က ကလေး ၁၆ ရဆိုပဲ...
အခုတော့ အဲ့လူကြီးတွေ လုပ်တာနဲ့ ကုန်သလောက်ရှိနေပါပြီ အန်တီ။ မြန်မြန်ကုန်သွားလည်း အေးတာပဲလို့။
ခုခေတ်ကတော့ အဘိုးတို့လို ဆယ့်ခြောက်ယောက် မွေးနိုင်တော့ဘူး ထင်တယ်ဗျ နှစ်ယောက်လောက်မွေးပီး သားကြောတစ်ခါတည်းဖြတ်နေကြပီလေ အမှန်ဆို ကလေးတွေဟာ အနာဂတ်အတွက် အင်အားဗျ နော့ ကိုဟင်အလှည့်ကျရင် အဖိုးစံချိန်ထက် ကျော်အောင်လုပ်နော် ဟီးးးးး
မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ။ ကျွန်တော်ကတော့ အဘိုးလောက် အစွမ်းအစမရှိတာ သေချာပါတယ်။ ၁၆ ယောက်မပြောပါနဲ့ ၅ ယောက်လောက်တွေးကြည့်တာနဲ့ကို ကျောချမ်းနေပြီ။
​တော​တောင်​ အ​ကြောင်း​တွေဆို အားကြီးစိတ်​ဝင်​စားတယ်​ ကိုဟင်​​ရေ😊😊
ဟုတ်ကဲ့ ။ အဘိုးပြောပြတဲ့ အကြောင်း မကုန်မခြင်း ရေးပြပါ့မယ်။
အမျိုး​တွေ​နဲ့တင်​ တစ်​ရွာတည်​လို့ရပီ ကိုဟင်​😁
ဟုတ်ပါ့။ ဒါတောင် ဆွေမျိုး အရင်းချာတွေနော်။ တခြား ဟိုနည်းနည်း ဒီနည်းနည်းတော်တဲ့ ဆွေမျိုးတွေ မပါသေးဘူး
လွမ်းရအောင် လုပ်ပြန်ပြီ နောက်တမျိုးက လည်း ဈေးကောင်းချက်။ ဒါနဲ့ ကိုဟင့် အဖိုး အဖွားက မိုက်သဗျာ။ Generation ဟာ တဆင့် ကျော်တတ်တယ်တဲ့။ ကိုဟင်လည်း သားသမီး အများကြီးရမယ် ထင်တယ် 😂
စိတ်ဝင်စားလာပြီး.. ဂျပန်တွေနေခဲ့တဲ့စမီးတို့ရွာထဲက တိုက်အိုအဟောင်း ဆန်စက်အဟောင်းတွေဆီ ကို. ပေါက်တူတစ်လက်နဲ့ခြေဆန့်ုပီးလေ. အမြန်တူးမှ.. တေကြာ . စတီးမစ်လူကလူတွေလာကူးကုန်မှဖြင့် မြန်မြန်သွား မှ. မဖြစ်ဘူး.. ရျွေ ချောင်းတွေ 😢😢😢
အမြန်သွားတူးပါ။ တွေ့ရင်လည်း လက်တို့ လိုက်ပါအုံး။
ဟု တ်ကဲ့ ပါ ခင်ဗျာ😂😂😂
ဟုတ်ကဲ့။ ကြိုးစားပြီး ဆက်လက်ဖေါ်ပြပေးပါမည်။
ကျွှန်တော်တို့ ကိုဟင်အဖိုးထက်သာအောင် ကြိုးစားရအောင် အမွာတွေချဉ်း မွေးမည့်နည်းရှာမယ် ။ MSC အင်အားတောင့်ဖို့ ခ်ခ် ။ သစ်မွှေးတွေ တစ်ချို့အတုံးလိုက် အတစ်လိုက် ပါကုန်ပါပြီ မြန်မာ့တောထဲခြေချင်းလိမ်နာ ။ ခု လမ်းဘေးဘဲကျန်တယ် ကြိုးဝင်း တွင်းထဲမယ် ပြောင်လို့ရှင်းလို့ ဒီတစ်ခုတော့ ရှာတော့ပါဘူး ။
လုပ်လိုက်တော့ ဒိုမီ။ အမွှာ တွေချည်းပဲ မွေးမဲ့ နည်း လေးများ မျှပါအုံး။
သစ်မွှေးထက် ဘောလုံးတစ်သင်းစာနဲ့ အရံလူ ငါးယောက် ရှိနေတာ မန်ယူလို ဘောလုံးသင်းထောင်လိုက်ရင် ခုချိန်ဆို ဒေါ်လာတွေ ဟောကနဲ ဟောကနဲ ဝင်လာမစဲ တသဲသဲနေမှာပဲ ဆာဟင်
အေးဆို... အဘိုးက ဘောလုံး အသင်း ထောင်ခဲ့ရမှာ.... ခုလောက်ဆို ရင် ကချင် မန်ယူလောက် ဖြစ်နေလောက်ပြီ။
အဲဗျာ ရွှေချောင်းပီးတော့ သစ်မွှေးအဆီ နဲ့ စွဲဆောင်လိုက်ပြန်ပီ။ ကိုဟင်ပြောတဲ့ သစ်မွှေးအဆီချောင်းကြီးသာရလိုက်ရင် ခုခေတ်လိုဆိုရင်တော့ မြန်မာပြည်မှာ ကုမ္ပဏီ ၁၀ ခုလောက်ထောင်ထားလို့ရပီဗျာ။ စိတ်ဝင်စားမိတယ် တောတွင်းဇတ်လမ်းများ။
အေးပါဆို။ အဘိုးပြောပြတုန်းကတော့ ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး။ အခုပြန်တွေး ကြည့်မှ နှမျှောစရာတွေ။
အဘိုးကတော့ မြင်သာမြင် မကြင်ရဖြစ်နေပါလား ရွှေချောင်းတုန်းကလည်း မသယ်နိုင် သစ်မွှေးကျပြန်တော့လည်း မရခဲ့
အေးပါဆို။ အဲဒါတွေသာ သယ်ခဲ့နိုင်ရင် ကိုဟင်လည်း SP တွေ အများကြီးရနေလောက်ပြီ။
Friend, your article is great.
From the heart of mind I have been postingalot of quality.
tinmyoaung (57) ·2months ago